ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်းတူအချိန်ပေးနိုင်အောင်… -
Posted on January 7, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့ ဖြုန်းရတဲ့အချိန်တွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတိုတောင်းဆုံး အချိန်တွေပါတဲ့။ သိပ်ချစ်လွန်းတော့ မခွဲနိုင်မခွာရက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို သူ့အတွက်ပဲ၊ သူ့တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲ ပေးချင်တတ်တာတော့ သဘာဝပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်ပေးဖို့ မေ့လာရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးဝေးမှန်းမသိ ဝေးသွားရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ကမ္ဘာကျဉ်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်းတူအချိန်ပေးနိုင်အောင် ဒီလိုအချက်လေးတွေကို သတိထားပြီးလုပ်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်…
ချစ်သူမျက်နှာ တစ်ကမ္ဘာလို့ထင်တတ်တဲ့ ယောင်းရဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ပါ။
ဒါအရေးကြီးဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ဖူးစာမပါလို့ ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် သူငယ်ချင်းအပါအဝင် ကိုယ့်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျမှ ငိုဟယ်၊ ယိုဟယ်နဲ့ သွားအကူအညီတောင်းရင်တော့ ဘယ်သူကမှ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ကူညီချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေ အချိန်ကို ရအောင် ဖဲ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးကို စွဲနေအောင် မှတ်ထားပါ။
သူတို့အတွက် သီးသန့်အချိန်ကို ဇယားဆွဲသတ်မှတ်ထားပါ။
နှစ်ရှည်လများ ပေါင်းလာတဲ့ ဒီမျက်နှာတွေကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူမျက်နှာလို ကြည့်ရတာ မတင့်တယ်နိုင်ပေမဲ့ ဒီမျက်နှာတွေကို တွေ့ရဖို့အတွက်တော့ သီးသန့်အချိန်ဇယားလေး ထားပေးရပါမယ်။ (ဥပမာ ကိုယ်ကခါတိုင်း ရုပ်ရှင်ရုံကို ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲ သွားတတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ သီးသန့်အချိန်ပေးပြီး သွားကြည့်တာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ရည်းစားမအားမှ တွေ့ကရာ ကြုံကရာလူကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။) ရည်းစားရသွားလည်း သူ့အပေါ်မှာ အရင်အတိုင်းပဲ ခင်ပါသေးတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့။
သူတို့နဲ့ ချိန်းထားရင် မဖျက်ပါနဲ့။
ကိုယ်ကတော့ ဘယ်နေ့တွေ့မယ်၊ ဘယ်မှာတွေ့မယ် ဘာတွေလုပ်ကြမယ်နဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဦးဆောင်ဆွဲပြီး ချိန်းဟယ်၊ ချက်ဟယ် လုပ်ထားပြီး အနားနီးတော့မှ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခု ပေါ်လာတဲ့အခါ သေရေးရှင်ရေးမှမဟုတ်ရင် မဖျက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလို တစ်ခါဖျက်လိုက်တာနဲ့ နောက်ဆိုလည်း ဖျက်မှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်သွားပြီး နောက်ကိုယ်ချိန်းလည်း မလာတော့ဘူးဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချိန်းတော့မယ်ဆိုရင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို တွက်ဆပြီးမှ ချိန်းပါ။ ပြီးရင် မဖျက်ပါနဲ့။
စိတ်မချလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားကို အစစအရာရာ သံတော်ဦးတင် အမြဲဖုန်းနဲ့ မျက်လုံးကို မခွာဘဲ စကားပြောနေရပြီဆိုရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဖုန်းကို အချိန်ပြည့် ကိုင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကိုယ့်ချစ်သူကို သေချာရှင်းပြထားပါ။ (စိတ်မချရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါလို့.. တစ်ချိန်လုံးတော့ ချတ်မနေနိုင်ပါဘူးလို့နော်..)
သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူတို့သိအောင်ပြောပြပါ။
တကယ်တမ်းတစ်သက်လုံး ပေါင်းသင်းရမှာက ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ဆိုပေမဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း ကိုယ်အခက်အခဲကြုံရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် အားပေးဖော် အားပေးဖက်ပါပဲနော်။ ဒါကြောင့် သူကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဘယ်လိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူသိအောင်သေချာ ပြောပြပါ။ (လူဆိုတာ ကိုယ့်ကို လိုအပ်နေမှလည်း အနားနေချင်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိတာကိုး)
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့လည်း ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းကြားမှာ ဗျာမများလောက်တော့ပါဘူးနော့်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးကိုလည်း နားလည်အောင် သေချာအေးအေးဆေးဆေး ရှင်းပြပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း သီးသန့်အချိန်လေး ပေးခိုင်းလိုက်ပါဦးလို့။
နှဈကိုယျခှဲခငျြစိတျတှေ ပေါကျနပွေီမလား၊ မညာခငျြစမျးပါနဲ့ ခြိမရယျ 😛
ကိုယျသိပျခဈြရတဲ့ခဈြသူနဲ့ ဖွုနျးရတဲ့အခြိနျတှကေ ကမ်ဘာပျေါမှာ အတိုတောငျးဆုံး အခြိနျတှပေါတဲ့။ သိပျခဈြလှနျးတော့ မခှဲနိုငျမခှာရကျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို သူ့အတှကျပဲ၊ သူ့တဈယောကျတညျးအတှကျပဲ ပေးခငျြတတျတာတော့ သဘာဝပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှကေို အခြိနျပေးဖို့ မလေ့ာရငျးနဲ့ နောကျဆုံးဝေးမှနျးမသိ ဝေးသှားရငျး ကိုယျ့ရဲ့ ကမ်ဘာကဉျြးလာတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို တနျးတူအခြိနျပေးနိုငျအောငျ ဒီလိုအခကျြလေးတှကေို သတိထားပွီးလုပျပေးဖို့တော့ လိုအပျပါတယျ…
ခဈြသူမကျြနှာ တဈကမ်ဘာလို့ထငျတတျတဲ့ ယောငျးရဲ့အကငျြ့ကိုဖြောကျပါ။
ဒါအရေးကွီးဆုံးနဲ့ အလိုအပျဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မပွောကောငျးမဆိုကောငျး ဖူးစာမပါလို့ ပွတျသှားတဲ့အခြိနျကရြငျ သူငယျခငျြးအပါအဝငျ ကိုယျ့ဘေးနားပတျဝနျးကငျြက လူတှရေဲ့ တနျဖိုးကို ကောငျးကောငျး နားလညျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျလိုအပျတဲ့အခြိနျကမြှ ငိုဟယျ၊ ယိုဟယျနဲ့ သှားအကူအညီတောငျးရငျတော့ ဘယျသူကမှ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ပွနျကူညီခငျြမှာမဟုတျဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ အတှငျးစိတျထဲမှာ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး မဖွဈမနေ အခြိနျကို ရအောငျ ဖဲ့ပေးရမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးကို စှဲနအေောငျ မှတျထားပါ။
သူတို့အတှကျ သီးသနျ့အခြိနျကို ဇယားဆှဲသတျမှတျထားပါ။
နှဈရှညျလမြား ပေါငျးလာတဲ့ ဒီမကျြနှာတှကေတော့ ကိုယျ့ခဈြသူမကျြနှာလို ကွညျ့ရတာ မတငျ့တယျနိုငျပမေဲ့ ဒီမကျြနှာတှကေို တှရေ့ဖို့အတှကျတော့ သီးသနျ့အခြိနျဇယားလေး ထားပေးရပါမယျ။ (ဥပမာ ကိုယျကခါတိုငျး ရုပျရှငျရုံကို ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ပဲ သှားတတျပမေဲ့ တဈခါတလမှော သူငယျခငျြးနဲ့ သီးသနျ့အခြိနျပေးပွီး သှားကွညျ့တာမြိုးပေါ့။ ကိုယျ့ရညျးစားမအားမှ တှကေ့ရာ ကွုံကရာလူကို ဆှဲချေါသှားတဲ့ ပုံစံမြိုးတော့ မဖွဈပါစနေဲ့နျော။) ရညျးစားရသှားလညျး သူ့အပျေါမှာ အရငျအတိုငျးပဲ ခငျပါသေးတယျ ဆိုတဲ့ စိတျမြိုးဖွဈအောငျပေါ့။
သူတို့နဲ့ ခြိနျးထားရငျ မဖကျြပါနဲ့။
ကိုယျကတော့ ဘယျနတှေ့မေ့ယျ၊ ဘယျမှာတှမေ့ယျ ဘာတှလေုပျကွမယျနဲ့ အစီအစဉျတှကေို ဦးဆောငျဆှဲပွီး ခြိနျးဟယျ၊ ခကျြဟယျ လုပျထားပွီး အနားနီးတော့မှ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ပတျသကျပွီး အကွောငျးကိစ်စတဈခုခု ပျေါလာတဲ့အခါ သရေေးရှငျရေးမှမဟုတျရငျ မဖကျြပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလို တဈခါဖကျြလိုကျတာနဲ့ နောကျဆိုလညျး ဖကျြမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတျမြိုးဖွဈသှားပွီး နောကျကိုယျခြိနျးလညျး မလာတော့ဘူးဆိုတာမြိုး ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခြိနျးတော့မယျဆိုရငျ အခွအေနအေရပျရပျကို တှကျဆပွီးမှ ခြိနျးပါ။ ပွီးရငျ မဖကျြပါနဲ့။
စိတျမခလြို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ကိုယျ့ရညျးစားကို အစစအရာရာ သံတျောဦးတငျ အမွဲဖုနျးနဲ့ မကျြလုံးကို မခှာဘဲ စကားပွောနရေပွီဆိုရငျတော့ သိပျအဆငျမပွပေါဘူးနျော။ ဒါကွောငျ့ သူတို့နဲ့ တှတေဲ့အခါမှာ ကိုယျဖုနျးကို အခြိနျပွညျ့ ကိုငျမနနေိုငျဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ကိုယျ့ခဈြသူကို သခြောရှငျးပွထားပါ။ (စိတျမခရြငျ ဖုနျးဆကျလိုကျပါလို့.. တဈခြိနျလုံးတော့ ခတျြမနနေိုငျပါဘူးလို့နျော..)
သူတို့ကလညျး ကိုယျ့ဘဝထဲမှာ ဘယျလောကျ အရေးကွီးတယျဆိုတဲ့အကွောငျး သူတို့သိအောငျပွောပွပါ။
တကယျတမျးတဈသကျလုံး ပေါငျးသငျးရမှာက ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ဆိုပမေဲ့ သူငယျခငျြးကလညျး ကိုယျအခကျအခဲကွုံရတဲ့အခါ ကိုယျ့အတှကျ အားပေးဖျော အားပေးဖကျပါပဲနျော။ ဒါကွောငျ့ သူကလညျး ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝတဈစိတျတဈပိုငျးထဲမှာ ပါဝငျပွီး ဘယျလိုအရေးကွီးတယျဆိုတဲ့အကွောငျး သူသိအောငျသခြော ပွောပွပါ။ (လူဆိုတာ ကိုယျ့ကို လိုအပျနမှေလညျး အနားနခေငျြတတျတဲ့ သဘာဝရှိတာကိုး)
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့လညျး ခဈြသူနဲ့ သူငယျခငျြးကွားမှာ ဗြာမမြားလောကျတော့ပါဘူးနေျာ့။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ခဈြသူလေးကိုလညျး နားလညျအောငျ သခြောအေးအေးဆေးဆေး ရှငျးပွပွီး သူ့သူငယျခငျြးတှအေတှကျလညျး သီးသနျ့အခြိနျလေး ပေးခိုငျးလိုကျပါဦးလို့။
Tagged balance, Friendship, Relationship, struggle
Family Letters From the Heart Love
Posted on July 10, 2017 July 10, 2017 Author Wai Zin
လူတိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မဟုတ်လား.. မိဘတွေပေါ်မှာရော ယောင်းတို့ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်မျိုး ထားကြသလဲ…
Posted on January 15, 2017 Author
စင်ဂယ်လ် တွေရဲ့ဘဝအရသာကို စင်ဂယ်လ်တွေသာ သိပါလိမ့်မယ်။ “စင်ဂယ်လ် အစ် သယ်ဘတ်စ်” ဆိုပြီး ရည်းစားနဲ့ ခဏပြတ်ပြီး ဖုန်လာလာထတဲ့ စင်ဂယ်လ်တွေကို မဆိုလိုဘူးနော်။ စင်ဂယ်လ်စစ်စစ် အက်ဖ်အေ (FA)တွေကိုပြောတာ။ဘိုပျော်စာ ကောင်းလဲတော့ ရှိုးကြည့်လက်??? အို စင်ဂယ်လ် စစ်စစ် အက်ဖ်အေ အပေါင်းတို့…ကိုယ်တွေ တနင်္ဂနွေလောက်သာယာတာ ကိုယ်တွေပဲ ရှိတယ်လေ။ဒါတွေကို အာအက်စ်တွေ မသိရှာဘူး။ ပြောလို့တော့ မရဘူး..ခုတောင် ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး ဝင်ဖတ်ရင်ဖတ်နေမှာ..။ ထားပါလေ..။ဒါသူတို့သဘော…( ဟိတ်.. ဝင်ဖတ်ပြီး အားကျလှပါ၏ ဆိုပြီး ရည်းစားနဲ့ဖြတ်တာတွေ ဘာတွေ မသိဘူးနော်..။ကြိုပြောထားတာ.။)ခုတော့ ကိုယ်တွေအက်ဖ်အေတွေ ရဲ့ ပျော်စရာ တနင်္ဂနွေကို အရသာခံပြီး ပြောလက်ဦးမယ်..။ (အက်ဖ်အေတွေရေ ဝုန်းပြီဟေ့?) “ချစ်ရေ/ ကိုယ်ရေ..တနင်္ဂနွေ ဘာလုပ်ကြမဲ…” “ဟာ..ချစ်က ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာ….။” ” ချစ်ကလည်းကွာ…ပန်းခြံပဲသွားမယ်..။”……စပြီလေ…အဲ့မှာ […]
ဝါသနာမတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရည်ရှည်ဘယ်လိုပေါင်းသင်းမလဲ
Posted on December 8, 2017 Author Thitsar Phyu
ဝါသနာမတူတာက ပြဿနာလား? အလုပ်အကိုင်မတူတာကပြဿနာလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ကသူငယ်ချင်းတွေမလား…